कोरोना उतपत्तिको रह्स्य र चीनको लापरवाही – Etajakhabar
रुपनी जि.एम – काठमाण्डौ, चीनको उहानबाट जन्मिएको कोरोना भाईरसले पछिल्लो २ महिनाको समयावधिदेखि यतिबेला पुरै संसारमा नै हाहाकार मच्चाई रहेको छ । ईरान हुँदै इटाली र इङ्ल्याण्ड हुँदै विश्वकै शक्तिशाली देश अमेरिकामा पनि यस्ले आफ्नो कब्जा जमाई सकेको छ । साथै यतिबेला छिमेकी राष्ट्र भारत हुँदै ग्रीन कन्ट्रिको उपमा पाएको नेपालमा पनि यस्ले प्रवेश गरि सकेको छ ।
चीनबाट फैलिएको यो डरलाग्दो भाईरसको जसरी अहिलेसम्म कुनै यथेष्ट उपचार र औषधी भेटिएको छैन त्यसैगरि यस्को जन्मको रहस्यलाई पनि नत बुझ्न सकिएको छ नत समाधानको कुनै ठोस उपाय नै अपनाउन सकिएको छ । यस विषयमा बडो अचम्म त के भने सबै खाले वैज्ञानिक र विशेषज्ञहरु भने यो रोग खासै खतरनाक होईन । केवल रुघाखोकीको एउटा अलि फरक रुप हो भनि रहेका छन् एकातिर भने अर्को तिर चनाखो नभएको खण्डमा यस्ले ज्यान पनि लिन सक्ने भनेर पनि आफुहरुको विश्लेषण प्रचार प्रसार गरि रहेका छन् ।
तर जे भएपनि यो भाईरसको उत्पत्ति किन र कसरी भयो भनेर जान्न निकै नै आवश्यक छ । यो भाईरस चीनको उहानबाट उत्पत्ति भएको हो भनेर भनिएता पनि यो कुरामा कत्तिको सत्यता छ त्यो भने पत्ता लगाउन निकै नै जरुरी बनेको विषय बनिसकेको छ । यो भाईरसको विषयमा धेरै विचारहरु बाहिरिएसंगै एउटा निकै महत्वपुर्ण विषय पनि बाहिरिएको छ । र यो विषय आम मानिसको मनमा कोरोनाको त्रास भन्दा निकै सुक्षम बनेको छ । या चीन सरकारले यस्को पब्लिसिटीलाई साँघुरो बनाएको छ भन्दा फरक नपर्ला ।
आखिर किन त पुरै विश्वभरि नै चीन सरकारले अहिलेसम्म कोरोना कसरी फैलन पुग्यो भन्ने बारेमा वास्तविक बयान दिन सकिरहेको छैन ? यस्को बारेमा एक चोटी सबैले मनन गरौं । कोरोनाको जन्म कसरी भयो भन्ने विषयमा चीनको उहान ल्याबमा ज्यानमारा यो भाईरसको रिसर्च गरिरहेका वैज्ञानिकले आफ्नो माईक्र्रोस्कोपमा एउटा अनौठो भाईरस सल्बल्याई रहेको देखे ।
मेडिकल क्षेत्रको ईतिहाँसमै यस्तो अनौठो भाईरस कहिल्यै नदेखिएको ल्याबमा कार्यरत एक वैज्ञानिक बताउँछन् । डिसम्बरको शुरुवाति हप्ता चल्दै गर्दा उहान शहर स्थित सी फुड बजार क्षेत्र वरपर रहने चीनियाँहरुमा अचानक ज्वरोबाट पिडित बन्न पुगे । एकै चोटी ज्वरोबाट ग्रसित बन्न पुगेकाहरुको टेस्ट गर्नकालागि सेम्पल उहान स्थित ल्याबमा पठाईयो । र त्यसपछि उनीहरुको सेम्पल उहान स्टुड अफ वेरोलोजी नेश्नल वायोसेफ्टी ल्याबमा पठाईयो ।
त्याहाँ वैज्ञानिकहरुले आफ्नो माईक्रोस्कोपमा जे देखि रहेका थिए त्यो निकै नै अत्यारिलो र भयानक थियो । त्यो भविष्यमा मानिसको ज्यान लिन सक्ने निकै नै खतरनाक ग्लोबल भाईरसको संकेत थियो । तर चीनियाँ अधिकारीहरुले भाईरसका विषयमा खबरहरु बाहिर नफैलियोस् र पुरै विश्वसामू चीनको बदनाम नहोस् भन्नकालागि भाईरस देखेका त्याहाँका डक्टर र वैज्ञानिकहरुलाई आफ्नो मुख नखोल्न आदेश दिए ।
डक्टर ली वेङ्ग लियाङको अस्पतालमा स्थानीय सि फुड मार्केटका करिब ७ जना बिरामी पुगेका थिए । यी तीनै डक्टर लियाङ थिए जस्ले दुनियाँलाई पहिलो पटक यो खतरनाक भाईरसको बारेमा सचेत गराएका थिए । जब लिले आफ्नो अस्पतालमा आएका बिरामीलाई देखे त्यति नै बेला उनलाई थाहा भईसकेको थियो कि यी सातै जना त्यही भाईरसको शिकार भैसकेका छन् भन्ने ।
डक्टर लीले तुरुन्तै यो बिरामी र भईरसको बारेमा आफ्नै सहकर्मीलाई अर्लट पनि गरे । र यो भाईरसको बारेमा पनि रिर्पोट पेश गरे । यति मात्र हैन यसको बारेमा उनले वि च्याट एपमा रहेको आफ्नो मेडिकल कलेजको ग्रुपमा पनि जानकारी दिए । र यस्का साथै डक्टर लीले सबै आफ्ना साथीहरु आफन्त र परिवारमा पनि यो भाईरसको बारेमा सचेत गराएका थिए ।
डक्टर लीले जानकारी गराए लगत्तै केही समय पछि उनको स्क्रिन सर्ट भाईरल हुन थाल्यो । त्यसपछि चीन सरकारले डक्टर लीलाई कसैले पनि सोच्न नसक्ने त्यो अवस्थामा पु¥यायो । त्यो समय २०२० को शुरुवातिको समय थियो । पुरै संसार नयाँ साल मनाउनमा व्यस्त थियो । त्यही समयको मध्यतिर यो भाईरस फैलिदै गयो । यो भाईरस यसरी फैलन शुरु ग¥यो कि यस्को बारेमा कसैले पनि कल्पना सम्म गरेका थिएनन् ।
यो खतरनाक भाईरस ७ जना हुँदै १४ र १४ बाट २१ अनि २१ बाट ४२ हुँदै सयौंको संख्यामा यसरी फैल्न पुग्यो । मानौं कि यो भाईरस नभई बंगालको खाडीबाट निस्कने मनसुुनि हावाको झोका हो । अचम्मको कुरा त के भने यो भाईरसको विषयमा चीन जानकार हुँदा हुँदै यस्को रोकथाम गर्नुको साटो यस्लाई लुकाउन तर्फ नै लागिरह्यो । तर चीन सरकारको आखाँ छल्दै भित्र भित्रै उहानको स्टुड अफ वेरोलोजी नेशलन वायोसेफ्टी ल्याबले यस्को जाँच जारी राख्यो ।
यो ल्याबमा पछिल्लो केही वर्ष यता चमेराद्धारवा फैलने रोगको विषयमा रिसर्च भईरहेको थियो । यो रिसर्च यसकारण चलिरहेको थिएन कि यो केवल उहान र उहानको आसपासको क्षेत्रमा चमेराको बाहुल्यता बढी थियो । यो रिसर्च चल्नुको कारण मुख्य कारण चमेरा लगाएतका अन्य जीवजन्तुको मासु ती प्रजातिका झोल त्यस क्षेत्रका मानिसहरुले आफ्नो आहारको रुपमा दैनिकी लिने गरिरहेका थिए । यस्लाई उनीहरुको चलन चल्तिको छाक भन्दा फरक नपर्ला ।
अहिलेसम्मको रिसर्चमा यही पत्ता लगाउने कोसिस जारि थियो कि सायद यो भाईस यिनै चमेराको मासुबाट फैलि रहेको हो । चाईनिज सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एण्ड प्रिभेन्सन स्टडिको डाटाले पनि यसैतिर इशारा गरिरहेको थियो । डक्टर ली वेङ्ग लियाङले लगातार आफ्ना डक्टर साथीहरु र जनतालाई न केवल सचेत रहन आग्रह गरिरहेका थिए उनले बिरामीलाई आईशोलेसनमा राखेर आफैले नै उपचार गरिरहेका पनि थिए । यसैबीचमा यो भाईरसको भाईरल हुने खबर चीनबाट पुरै दुनियाँमा फैलन शुरु भईसकेको थियो ।
जब यो खबर पुरै दुनियाँमा फैलन थाल्यो तब बल्ल चीनले मान्न बाध्य भयो कि उस्को मुलुकलाई कोरोना नामको महामारीले जकड्न थालेको रहेछ भन्ने । त्यसै क्रममा चीनले ३४ वर्षिय डक्टर लीद्धारा भाईरल भईसकेको कोरोना भाईरसबाट सचेत रहन भनिएको म्येसेजको आधारमा उनलाई सरकारको तर्फबाट स्पष्टिकरणको नोटिस पठाएर जवाफ मागियो । तर डक्टर लीको तनाव आफ्नै सरकारलाई जवाफ दिएर मात्र सकिएन । यस लगत्तै उनी माथि जनतामा भ्रम श्रृजना गरेको आरोप लागायो चीन सरकारले ।
आफु माथि आरोप लागेपछि डक्टर लीले तुरुन्तै लिखित रुपमा माफि मागे । यसैबीचमा उहान र आसपासका क्षेत्र लगाएत पुरै चीनलाई यो खतरनाक भाईरसले आफ्नो चपेटामा पारि सकेको थियो । र यसबाट भईरहेको मानिसको मृ’त्युको संख्यामा पनि अपत्यारिलो रुपले बृद्धि भईरहेको थियो । सोही समयमा कोरोनाको बारेमा शुरुमै सबैलाई जानकारी गराउने डक्टर लीको मृ’त्यु भयो भन्ने खबर अचानक बाहिरियो ।
चीनको भनाईमा १२ जनवरीदेखि डक्टर ली अस्पतालमा भर्ना थिए र ३० जनवरीमा मात्रै पत्ता लाग्यो कि उनी कोरोना भाईरसद्धारा ग्रस्ति भएका रहेछन् । चीनले भन्यो कि उनलाई बचाउनकालागि निकै नै कोशिश गरियो तर सकेनौं । उहान सेन्ट्रल अस्पतालले आफ्नो रिपोर्टमा डक्टर लीको मृ’त्यु ७ जनवरीको राति २ बजेर ५८ मिनेटमा भएको थियो । तर उनको मृ’त्युको खबरलाई सरकार विरोधि गुटले चीनले उनलाई भाईरसको बारेमा सबैलाई सचेत गराएकोमा सजाए स्वरुप उनलाई मारेको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरिरहेका छन् ।
डक्टर लीको मृ’त्यु के कोरोना कै कारण भएको हो त या फेरी चीनले लीको मृ’त्यु गराएको हो यो खबर अहिले पनि एउटा पश्नमै सिमित भईरहेको छ । कोरोना चमेराबाट फैलिएको हो कि चीनको ल्याबबाट भन्ने पनि अर्को प्रश्न बनिरहेकै बेला चीनका वैज्ञानिक र डक्टरहरुले भने कोरोना चमेराबाट नभई चीनको ल्याबबाट फैलिएको दाबी गरेका छन् । आखिर चीनले किन लुकाई रहेको छ त ? कोरोना उत्पत्तिको रहस्यलाई ।
चीनबाट जन्मिएको कोरोनाले पुरै विश्वलाई नै निल्न लागि सकेको बेलामा पनि के चीनले यस्को वास्तविकतालाई लुकाएर राम्रो गरिरहेको छ त ? यो विषयमा सबैको ध्यान केन्द्रित हुन निकै आवश्यक भएको छ ।
Posted on: Tuesday, March 24, 2020 Time: 12:20:56
-20079 second ago
-18608 second ago
-14400 second ago
-10108 second ago